Busiza ngani ubukhona bebhodi lenkampani – Bayede News
Busiza ngani ubukhona bebhodi lenkampani
BANINGI abantu abalubalubela nabafisayo ukuba ngamalunga
by Bayede-News Posted on 27 September 2019 2 October 2019
Izindlu zenhlangano yezokusakaza iSABC okunebhodi elisematheni kulezi zinsuku Isithombe: The South African
BANINGI abantu abalubalubela nabafisayo ukuba ngamalunga ebhodi ethize. Kunezinkampani ezinkulu nezincane ezinamaBhodi alawula ukusebenza kwawo. Umthetho uchaza amandla anikwe iBhodi ukwenza umsebenzi wayo obhalwe kunqubomgomo wenkampani. Into eyenza abanye bakuthande ukuba ngabaqondisi yinkokhelo ewumvuzo evamise ukutholwa yilowo nalowo mqondisi ngomsebenzi awenzela inkampani. Umthetho ubeka ngokucacile ukuthi leyo naleyo nkampani kumele ibe namalunga amangaki. NgokoMthetho Wezinkampani uNombolo 71 wezi-2008 olawula ukusebenza kwezinkampani, kunemithetho elawula ukusebenza kwamabhodi ezinkampani. Lo mthetho ubeka ngokusobala imisebenzi okumele yenziwe ngabaqondisi abangamalunga eBhodi.
Ubukhona bomthetho buchaza ukuthi uma ibhodi ingawenzanga umsebenzi emiselwe wona ingathweswa icala. Ngokwalo mthetho ibhodi kumele ibe nolwazi olufanelekile oluyoyisiza iqikekele ukuphumelela kwenkampani ukwenza imisebenzi eyakhelwe ukuwenza, ngokwethemebeka nangempumelelo. Uma inkampani yehlulekile ukuwenza ngokwethembeka umsebenzi, lokho kusho ukwehluleka kweBhodi. Yilowo nalowo mqondisi oyilunga lebhodi kumele aphendule ngalokho okungukwephula umthetho okwenzeke ngenkathi kuyibhodi elilawula ukusebenza kwenkampani. Kuveza ngokusobala ukuthi kubalulekile ukuba lowo ofisa ukuba ngumqondisi ebhodini yenkampani abe nolwazi oluthile oludingekayo ukuze inkampani iqhube isebenze ngendlela esemthethweni. Ulwazi oludingeka kakhulu kumuntu okufanele abe yilunga ulwazi lokuphathwa kwezimali, ulwazi
lokuphathwa kwabasebenzi, ulwazi oluqondene ngqo nomsebenzi owenziwa yileyo nkampani. Lolu lwazi lomqondisi lusiza ukubhekisisa lokho okwenzeka enkampanini, enze isiqiniseko ukuthi kwenzeka ngendlela esemthethweni. Kunemigomo emelwe wukulandelwa yileyo naleyo nkampani, okuthi uma ingenzekanga ngokufanelekile, kube nokujeziswa okuthile, noma wukuphendula okungaze kufinyelele ekubeni kukhokhwe inhlawulo ngalokho okuphambene nenqubo. Izinkampani zizama ngokusemandleni ukulandela umthetho ukuze ziqhubeke nokusebenza. Ukuba yilunga leBhodi akusiwo umsebenzi wokunethezeka nokupepenyeka ngoba kuneziwombe lapho kumele amalunga athathe izinqumo ezinqala ezizokhulisa zenze ngcono ukusebenza kwenkampani. Imali ekhokhwa yinkampani kumalunga eBhodi ngeyokuzinikela enza umsebenzi obucayi odinga ulwazi. Kuyinto ebalulekile ukuba kuthathwe umuntu owethembekile futhi onolwazi olufanelekile ukuba abe yilunga lebhodi. Kuyaye kumangalise kwesinye isikhathi, lapho kuyaye kungabhekisiswa ulwazi olukhethekile kumuntu okhethwa ukuba yilunga leBhodi. Abanye bathi lokho kujwayeleke ukubonakala ezinkampanini zikaHulumeni. Ngabe uHulumeni akanandaba nokugcinwa komthetho? Sekucishe kube yinto ejwayelekile ukuzwa kuphoswa imibuzo kusihlalo webhodi lenhlangano ethile kubalwa izinto ezithile ezingahambanga kahle. Kulezi zinyanga ezedlule besekuyinsakavukela ukubona kuthelevishini ulalele nasemsakazweni kuphekwe ngemibuzo abaholi bezinkampani ezingamabhizinisi kaHulumeni.
Lokhu bekuvela ezithangamini zamaKhomishini ehlukene kucutshungulwa indlela obekusetshenzwa ngayo kulezi zinkampani. Ezinye zezinkampani engizikhumbulayo zivela kuKhomishini yi-Eskom; yiSABC; yiPIC; iTransnet. Abebephekwa ngemibuzo bekuvamise ukuba kube usihlalo webhodi nesikhulu esiphezulu (CEO). Kube khona isikhathi ezithile lapho kubizwa amalunga athile ebhodi ukuba nawo aphoswe imibuzo. Kanti kubaluleke kangakanani ukusebenza kwebhodi enkampanini? Uqala kuphi uphele kuphi umsebenzi webhodi? Kukhethwa abanjani ukuba ngamalunga ebhodi? Into evela obala ngemibuzo ebuzwa kulabo abavela kumaKhomishIni wukuthi basolwa ngokungawenzi umsebenzi abakhethelwa ukuwenza njengoba bengabaqondisi kulezi zinkampani. Kwabanye kubalwa izigidi zemali esetshenziswe ngendlela engachazeki ngendlela egculisayo.
Ezindabeni ngoLwezi onyakeni wezi-2016 kuke kwaba nombuzo ngeBhodi yakwaEskom, ukuthi; “Ngabe ingcole ngaphezu kwawo wonke amabhodi aseNingizimu Afrika na?” Lo mbuzo wawubuzwa kubikwa umbiko wezimali oshiya imibuzo mayelana nokusetshenziswa kwezimali, kubhekwa neSikhulu Esiphezulu senkampani wangaleso sikhathi uMnu uBrian Molefe. Konke okwakubalwa embikweni kwakwenzeka ikhona iBhodi okumele igunyaze eziningi izinto. Kwaba nemibuzo engaphendulekanga kuze kube namuhla. Sibhala lapha sekuphele iminyaka emibili sadlula lesiwombe. Inkampani yakwa-Eskom isenenkinga kuze kube namuhla. Lokhu kushiya imibuzo mayelana nomsebenzi webhodi. Baningi abahalela ukungena emabhodini bebona abantu ababukeka bengenamsebenzi otheni kodwa abahola imali ethile ngokuba sebhodini, zonakale izinto bekhona kodwa bangenziwa lutho ngumuntu. Lokhu kuvusa le mibuzo esike sayithinta ngaphezulu mayelana nokusebenza kwebhodi. Ngabe kunobudedengu kuHulumeni uma sekuyiwa ekukhetheni nasekugcinweni kwezinkampani zimsulwa zethembekile? Kunenhlangano ebizwa nge-Institute of Directors of Southern Africa (IoDSA) eqaphe ukusebenza kwamabhodi ehlukahlukene. Le nhlangano inemigomo ebekiwe yokusebenza kwezinkampani. Inomsebenzi wokuqeqesha labo abafisa ukuthola ulwazi lokusebenza kwamabhodi, yandise ulwazi lwalabo asebevele bengamalunga amabhodi. Izinkampani ezinezikhala zamalunga ebhodi ezidinga ukugcwaliswa zizithumela kule nhlangano. Iyinhlangano ezimele ekumele ngezinyawo ukwethembeka komsebenzi wamabhodi. Kubalulekile ukukhuthaza labo abanamakhono athile, futhi benolwazi oluthe phecelezi lalokho okubizwa ngokulawula izizinda zemisebenzi ukuba bazicije bazilungisele ukuthatha amathuba uma evela.